कम उमेर मै किन बुढो देखिन्छ मानिस ? बुढो नदेखिन यस्तो गर्नुहोस .. – Ujyaalo Patrika
कम उमेर मै किन बुढो देखिन्छ मानिस ? बुढो नदेखिन यस्तो गर्नुहोस ..
बुढो देखिनु मानिसका लागी निकै पट्यारलाग्दो हुने गर्दछ । बुढो हुनु स्वभाविक जीवन प्रकृया भएपनि गलत खानपान र जीवनशैलीका कारण आजकल कतिपय मानिसहरु उमेर नपुग्दै बुढो देखिन्छन् ।
उनीहरु उमेरले नभई शारीरिक रुपमा बुढो हुन्छन् । यो अवस्थामा शरीर कमजोर र लाचार हुन्छ ।
आजकल मानिसहरुमा रहने गरेको गलत दिनचर्या, खराब खानपान, अनावश्यक सोच तथा चिन्तनले हामीलाई बुढो पार्दछ ।
खाने, सुत्ने, आराम गर्ने वा व्यायामका लागी समय छुट्याउन नसक्दा मानिस बुढो देखिन्छ । यसका मुख्य कारण निम्न छन् ।
आजकल मानिसहरुमा सहि समय, सहि मात्रा र स्वथ्यकर खाना नखाइदिदा यसले शरीरलाई उमेर नपुगी बुढो पार्ने गर्दछ । गलत खानाको असर मुटुमा पर्न जान्छ र यसले बिस्तारै शरीर गाज्दै लान्छ ।
२. बढि आराम
धुम्रपान कुनै पनि हालतमा शरीरका लागी फाइदाजनक हुदैन । यसले रगतलाई चोक्टा चोक्टा बनाउँछ । यसले फोक्सो देखि मस्तिष्कसम्म असर पार्दछ । रगतको प्लेटलेट्स पनि नष्ट पार्दछ । धुम्रपानले शरिरमा खराव कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि बढाउने भएकाले शरीर जीर्ण हुदै जान्छ ।
४. मदिरा सेवन
मदिरा सेवनले रक्तचाप बढ्छ साथै मुटुलाई प्रभावित पार्दछ । शरीरमा भएको भिटामिन बी र सीलाई समेत मदिराले नष्ट पार्दछ । मदिराले हर्ट अट्याक, स्ट्रोक र उच्च रक्तचाप बढाई उमेर नपुगी मानिसलाई कमजोर र बुढो बनाउँछ ।
चिन्ता वा तनावले समेत मानिसलाई बुढो देखाउन गर्दछ । यसले मुटुको स्वास्थ्यमा निकै घातक साबित हुन्छ । तनावले रक्तचाप र हानिकारक कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई बढाउँछ । यसले हृदयघातको सम्भावनालाई पनि बढाएर लान्छ ।